Ny kardemir amin'ny tontolo iainana ao Kardemir dia tsy mijanona amin'ny 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral Anatolia78 KarabukNy kardemir amin'ny tontolo iainana ao Kardemir dia tsy mijanona amin'ny 2020
09 / 01 / 2020 78 Karabuk, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, TORKIA
Kardemir dia tsy nanapaka ny hafainganana amin'ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana
Kardemir Karabük Iron and Steel Industry and Trade Inc., Filohan'ny birao mpitantana Mustafa Yolbulan, tamin'ny 2020, dia nilaza fa ny laharam-pahamehana dia ny famatsiam-bola amin'ny tontolo iainana. Nilaza fa mitohy ny famatsiam-bola tontolo iainana mitentina $ 50 tapitrisa, hoy i Yolbulan, ylelikle Amin'izany, hahatsapa ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo iainana mitentina 200 tapitrisa dolara isika ary hanatanteraka ny asa rehetra nataontsika.
Mustafa Yolbulan, Filohan'ny Birao talen'ny serasera, izay nampiantrano ireo mpitsidika avy amin'ireo andrim-panjakana sy fikambanana samihafa ao amin'ny orinasanay, dia nanao fanombanana ihany koa momba ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo iainana amin'ny taom-baovao. Ny filazan'izy ireo fa ny laharam-pahamehany dia ny tontolo amin'ny 2019 tahaka ny tamin'ny taona 2020, dia nilaza i Yolbulan fa hanao volavolan-karena mitentina 50 tapitrisa dolara hafa izy ireo amin'ny dingana fahatelo sy farany.
Ny mampahatsiahy fa nanomboka ny taona 2019 tamin'ny fanokafana ny famatsiam-bolan'ny tontolo iainana ao amin'ny Sinter Region izay nandraisan'ny Minisitra Murat ny tontolo iainana sy ny Urbanization, ary tao anatin'ny andro farany tamin'ity taona ity dia nanomboka ny fanokafana ny famatsiam-bola fanampiny momba ny tontolo iainana amin'ny fantsom-bolan'ny Blast Furnace District Dust Holding System ary ny Central Wastewater fitsaboana voly. Mikasika ny famatsiam-bola dia hoy izy:
“Ny tontolo iainana no zava-dehibe indrindra sy laharam-pahamehana ho an'ny fitantanana antsika. Nahazo famatsiam-bola be dia be hatreto. Andiany farany izao. Amin'ity vanim-potoana farany ity dia hamita ireo andiam-pampianarana momba ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo iainana isika izay misy 24 vaventy sy kely misy entana izay mitentina 50 tapitrisa dolara. Ny taham-panatanterahana ny sasany amin'ireto fampiasam-bola ireto izay natombokay tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2019 dia mihoatra ny 90%. Saika isam-bolana mandritra ity taona ity dia hahavita iray na roa isika. Anisan'izany ny rafitra famoretana vovoka, concreting saha, faritra fitahirizana mihidy, rafitra fanaraha-maso famotsorana famonoana vovoka, bateria fananganana vovoka, famatsiam-bola amin'ny tontolo iainana toy ny fanavaozana ny lozom-bakoka biolojika. Ao anatin'ny sehatry ny fampiasam-bola, dia hanatanteraka fanatsarana ara-maso sy fambolena ary hamboly zavamaniry sy hazo 50 XNUMX izahay ary hanambara ny Kardemir maitso. Ny tatitra momba ny fandrosoana isaky ny fampiasam-bola dia arahi-maso tsara
Kardemir dia tsy manapaka haingana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana
Minisitry ny Fikarohana momba ny tontolo iainana nanadihady ny Minisitra
Tsy mitaredretra ny fampiasana fiarandalamby
Ny fampindramam-bola amin'ny fitaterana any Kayseri dia tsy mijanona haingana
Fitantanam-pitaterana an-dalamby any Bursa Aza miala haingana
Kardemir's 300 Million Investment Investment
Kardemir dia mampanao fananganana tontolo vaovao momba ny tontolo iainana
Kardemir dia mamolavola fanandramana bebe kokoa ho an'ny famatsiam-bola vaovao momba ny tontolo iainana
Ny fampiasam-bola haingam-pandeha haingam-pandeha hatramin'ny 2020 dia hahatratra $ X billion USD
Izmir Fitateram-bola amin'ny Izmir Nahazo ny anjaran'ny Lion tamin'ny teti-bola 2020
Istanbul Metro Investments dia nahazo ampahany lehibe indrindra amin'ny tetibola 2020
Famatsiam-bolan'ny fotodrafitrasa GMKurtalan - Tetikasa lalamby Cizre Border 2013 fampiasam-bola…
KARDEMİR fampiasa amin'ny tontolo iainana
Mifandraisa mivantana amin'i Mustafa
Ny fanapoahana fantsona fananganana vovoka